အိပ်ရေးမဝခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး (၁၀) ခု - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
အိပ်ရေးမဝခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး (၁၀) ခု
31 Oct 2016 . 3:46 PM
အိပ်စက်ခြင်းသည် သတ္တ၀ါတိုင်းအတွက် အရေးကြီးလှပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ လင်းနို့ဟာ ၁၉.၉နာရီ၊ ခြင်္သေ့ဟာ ၁၃.၅နာရီ၊ ကြောင်ဟာ ၁၂.၅နာရီ၊ ခွေးဟာ ၁၀.၁နာရီ၊ ယုန်ဟာ ၈.၄နာရီ၊ နွားဟာ ၄နာရီနှင့် မြင်းဟာ ၂.၉နာရီ အသီးသီးအိပ်စက်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့ ၂၄နာရီတွင် ၈နာရီ အိပ်စက်ကုန်ဆုံးစေခြင်းဖြင့် အိပ်စက်ခြင်းသည် လူတစ်ယောက်၏ ဘ၀တွင် အရေးကြီးကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေဟာ သန်းခေါင်ညဉ့်နက်တိုင်အောင် ရည်းစားနှင့်ဖုန်းပြောခြင်း၊ Chatting ထိုင်ခြင်း၊မူးယစ်သောက်စားခြင်း အစရှိသဖြင့် အိပ်စက်ခြင်းကို အရေးမပေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အကျိုးဆက် (၁၀) မျိုးကို ဆင်ခြင်ဖွယ် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
သမိုင်းမှာ အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် မတော်တဆမှုများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၉ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် Three Mile Island မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နယူးကလီးယားယိုစိမ့်မှု၊၁၉၈၉ခုနှစ် မတ်လ ၂၄မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Exxon Valdez ဓာတ်ငွေ့လှောင်ကန် ယိုစိမ့်မှုနှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံ Chernobyl နယူးကလီးယား ယို့စိမ့်မှု ဖြစ်ရပ်တွေဟာ အိပ်ရေးမ၀ခြင်းကြောင့် မတော်တဆဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာလည်း ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေ ဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေဟာ အရက်သေစာမူးယစ်ပြီးဖြစ်ပွားတဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေနှင့် ဆတူခန့်ပင်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားယာဉ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိန်းရေး အဖွဲ့အစည်းက တစ်နှစ်လျင် အိပ်ရေးမဝမှုကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုများ အကြိမ်ရေ ၁သိန်း (၁ဝဝ,ဝဝဝ) ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် လူ ၁,၅၅၀ ခန့် အသက်ဆုံးရှူံးရပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝမှုပြဿနာဟာ အသက် ၂၅နှစ်အောက် လူငယ်တွေ အဓိကရင်ဆိုင်နေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း မတော်တဆမှုများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းသည် တွေးခေါ်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းကိစ္စတွေမှာ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍမှာပါဝင်တာကြောင့် အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝတဲ့အတွက် တွေးခေါ်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရည်တွေကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝတာကြောင့် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းပြီး အလွဲများစွာ ဖြစ်စေပါတယ်။ လုပ်သမျှအလွဲဖြစ်ကုန်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် “အလွဲမောင်မောင်” ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ၊နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊သွေးဖိအားမြင့်ခြင်း၊ဆီးချိုရောဂါ စတဲ့ ရောဂါပေါင်းစုံကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ညအိပ်မပျော်ရောဂါရှိသူ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ အနာရောဂါချူချာကြပါတယ်လို့ လေ့လာမှုများစွာအရ သိရပါတယ်။
၄။ အိပ်ရေးမဝခြင်းဟာ လိင်စိတ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက အိပ်ရေးမဝတဲ့ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်စိတ်လျော့ကျလာပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အားအင်လျော့နည်းလာမှု အိပ်ရေးမ၀မှု ၊ စိတ်ဖိအားများလာမှုတို့ဟာ လိင်စိတ်လျော့နည်းဖို့ အဓိကအကြောင်းအရာတွေပါ။ အိပ်ရေးမဝတဲ့အမျိုးသားအများစုဟာ လိင်ဟောမုန်း (Testosterone) လျော့နည်းလာပါတယ်လို့ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် Clinical Endocrinology & Metabolism ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတဲ့လူတွေ၊ စိတ်နှလုံးပူပန်နေတဲ့လူတွေဟာ တစ်နေ့ကို အိပ်စက်ချိန် ၆နာရီအောက်ပင် ရှိတယ်ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ အိပ်မပျော်ရောဂါရှိသူတွေဟာ စိတ်ကျဝေဒနာဖြစ်တန်စွမ်း သာမန်လူတွေထက် ၅ဆပိုတယ်ဆိုတာ လူ ၁၀,၀၀၀ ကို စမ်းသပ်ပြီး သုတေသနအရ သိရပါတယ်။
လူတွေဟာ အိပ်ရေးမဝတာနဲ့ အသားအရေတွေ ၀င်းဝါပြီး ၊မျက်ခွံတွေ အစ်လာပါတယ်။အသားအရေ ရွတ်တွလာပြီး မျက်ကွင်းများလည်း ညိုလာပါတယ်။ အိပ်ချိန်မလုံလောက်တဲ့အခါ ခန္ဒာကိုယ်ဟာ Stress ဟောမုန်းများကို ဖြစ်စေပြီး အသားအရေကို ရင့်ရော်စေပါတယ်။ “နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာ သင့်ခန္ဒာကိုယ်မှာ တစ်ရှူး (ဆဲလ်) အဟောင်းတွေ ဖယ်ရှားပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ အစားထိုးရပါတယ်။ အိပ်ချိန်နည်းလာတာနဲ့ လူက ရင့်ရော်လာတာပဲ” လို့ အိပ်စက်ရေးရာလေ့လာသူ ဒေါက်တာ ဖီးလ် ဂတ်မန်း (Dr. Phil Gehrman) က ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နှင့်အမေရိကန် သုတေသနပညာရှင်တွေဟာ မှတ်ဥာဏ်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ အဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကို အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေဟာ ဦးနှောက်ဘေးဘက်ကြမ်းပြင်ရဲ့ အလယ်ပိုင်းအဖု (Hippocampus) ဆီမှ မှတ်ဥာဏ်သိုလှောင်ရုံ (Neocortex) ဆီသို့ မှတ်ဥာဏ်ကူပြောင်းခြင်းဟာ နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်မောကျနေတဲ့ ညအခါမှာ အများဆုံးဖြစ်တာကြောင့် အိပ်ရေးမ၀သူတွေဟာ မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတော့ဘဲ မေ့လျော့တတ်ပါတယ်။
အိပ်ရေးမ၀ခြင်းဟာ ဆာလောင်မှုကို လွန်စွာဖြစ်စေပြီး အဝလွန်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အိပ်ချိန် ၆နာရီအောက်လျော့နည်းတဲ့သူတွေက အိပ်ချိန် ၇နာရီမှ၉နာရီ အတွင်းအိပ်စက်တဲ့သာမန်လူတွေထက် အ၀လွန်ရောဂါဖြစ်ဖို့ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းပိုတယ်ဆိုတာ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်သော သုတေသနတစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
၉။ အိပ်ရေးမ၀ခြင်းဟာ သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ် ၂ခုအတွင်းမှာ အိပ်စက်ခြင်းပုံစံမကျမှုကြောင့် ဗြိတိသျှအစိုးရ၀န်ထမ်း ၁၀,၀၀၀ ခန့် သေဆုံးရတယ်ဆိုတာ သုတေသနပညာရှင်တွေ သိရှိရပါတယ်။ တစ်နေ့တွင် ၅နာရီမှ ၇နာရီအထိ အိပ်စက်တဲ့သူများဟာ သာမန်လူတွေထက် သေဆုံးမှု ၂ဆပိုများတာကို ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ရေးမ၀ခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်တန်းစွမ်း ၂ဆပိုပါတယ်။
အိပ်ရေးမ၀ခြင်းဟာ ကျနော်တို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲမှားနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမ၀ခြင်းကြောင့် စိတ်ဆိုမှု၊ခေါင်းရှူပ်မှုများစွာတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ များစွာထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
by Moethae Say . 50 mins ago